အသံလွှင့်ခြင်းအာရှ 2016 ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » broadcast အာရှ 2016 ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ငါ (သင်သိ 16 နာရီအချိန်ကွာခြားချက်) left မတိုင်မီဒါနဲ့ရက်အနည်းငယ်အဆိုပါ 2016 အသံလွှင့်အာရှ Show ကိုမှီ, နေ့, စာသား, စင်္ကာပူမှရလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဥယျာဉ်မြို့တော်သတ္တိခရီးသွားပူဇော်ဖို့အများကြီးရှိပြီးငါဂျက်သုံးနေပြီဖို့ညှိနှင့်စိမ်-in ကိုဒေသခံမြင်ကွင်းများအချို့ကိုဖေါ်ပြခြင်း-up, တောက်ပခြင်းနှင့်စောစော 31 ပေါ်မှာဤ Multi-မီဒီယာ event မှာမတိုင်မီတချို့အချိန်ကိုခွင့်ပြုချင်ခဲ့တယ်st.
အင်္ဂလိပ်အဖြစ်ကောင်းစွာ, နေရာတိုင်းပြောပြီနှင့်ဆိုင်းဘုတ်များအင်္ဂလိပ်များမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုလုံးကိုမွို့၌ကိုယူပြီးတစ် vantage အမှတ် - ကပြောသည်နှင့်အတူ, ငါ ArtScience ပြတိုက်နှင့် Marina Bay Sands Skypark မြင်ရပါလိမ့်မည်ရှိရာအပန်းဖြေသူ့ဟာသူမှာစတင်မြင်ကွင်းများကိုမြင်ချွတ်စင်္ကာပူရဲ့ထူးချွန်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်အပျေါမှာရှိပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ skypark မှစ. ငါအထင်ကြီးနှစ်ဆ helix တံတား, port, ဂလားပင်လယ်အော်အားဖြင့်ဥယျာဉ်များနှင့်ထူးခြားသောစင်္ကာပူ skyline ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်! ငါပိုကောင်းတဲ့သောတဦးတည်းအဘို့အကြှနျုပျ၏ acrophobia နေအိမ်စွန့်ခွာချင်ပါတယ် ... ယူ-in ကိုမှမြင့်မားသောလက်ဖက်ရည်အမှတ်တရပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များကို, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီကြီးလေ့လာရေးဘီးပေါ်တွင်ကားများထဲကတစ်ခုအတွင်း၌ချင်တယ်! တရုတ်တန်း ... အာရပ်ရပ်ကွက် ... အကိုလိုနီခရိုင်နှင့်, သင်တန်း, ငါကမ္ဘာကျော်စင်္ကာပူတိရစ္ဆာန်ရုံသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်ရှိသည်လိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်!
ကြောင့်လေးအာရှကျားတစ်ဦးအဖြစ်သူ့ရဲ့အနေအထားမှ, စင်္ကာပူကဤဖြစ်ရပ်ကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပရန်စံပြတည်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကိုယ်တိုင် Marina Bay Sands Resort ကို / ကာစီနို / ပြပွဲ-ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာမှာအရပ်ဌာနတာကိုပြသ - ဤ 8 ဒေါ်လာဘီလီယံအပန်းဖြေသူ့ဟာသူနေတဲ့ဧရာမအတွေ့အကြုံကဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအသံလွှင့်အာရှ Show ကိုလုံးဝအကြှနျုပျအဘို့ထိပ်ကိုကျော်တပြင်လုံးကို Marina Bay Sands အတွေ့အကြုံကိုတွန်း; ကစိတ်ကူးဖြစ်ရပ်တစ်ခုအလွရာအရပ်ကိုပဲ!
Acebil, Blackmagic, Cine ပစ္စည်း Pte Ltd. , DB Elettronica, Edgeware, Enco စနစ်များ Inc မှ, Vizrtစသည်တို့ကို, Wellav Technologies က, Ltd. , Xor မီဒီယာလီမိတက်, Yamaha, Music, Zycast နည်းပညာ Inc ကိုစသည်တို့ကိုစသည်တို့ကိုအရှေ့ပိုင်းနှင့်အနောက်ပိုင်းမီဒီယာကုမ္ပဏီရာပေါင်းများစွာနှင့်ရာပေါင်းများစွာ - A ကနေ Z ကိုမှ - လှပသော Marina Bay Sands အဖြစ်နှင့်အတူ, ဒီမှာရှိနေခြင်းရှိ ဒီဖြစ်ရပ်ဖို့နောက်ခံကိုကြည့်ရှုရန်၎င်း၏အမှန်တကယ်မျက်မှောက်။
အဲဒီမှာဒီ4ရက်ကြာဖြစ်ရပ်အတွက်လေ့လာစူးစမ်းဖို့အများကြီးဖွင့်, ဒါရဲ့အနည်းငယ်အမျိုးအစား / ပျေါလှငျစပြပွဲတက်ခြိုးဖောကျခွငျးအားဖွငျ့စတငျပါစေ:
အဆိုပါ, 2015 အတွက်မိတ်ဆက် နေရာတိုင်းမှာတီဗီ! ဇုန် ကဖြစ်ရပ်သို့အပြီးအပိုင်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးရဲ့ထိုကဲ့သို့သောရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အောင်မြင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ linear နှင့် Non-linear အသံလွှင့် OTT, ရှေ့ဆက်မယ့်ဧရာမခုန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးနဲ့ multi-screen ကိုဖြေရှင်းချက်ကဒီမှာကြွယ်ဝပြည့်စုံ။
ရုပ်ရှင် / ရုပ်ရှင် / ထုတ်လုပ်ခြင်း ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံထုတ်လုပ်မှု tools များနှင့် software-အစွန်းဖြတ်တောက်ပျေါလှငျ။ ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများသည်ဤနေရာတွင်အချို့သောချုပ်နည်းပညာများပြပါလိမ့်မည်, သူတို့ကသင့်ရဲ့စတူဒီယို excel ကူညီရန်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။
Professional ကအသံနည်းပညာ 2016 ကျွမ်းကျင်စွာစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်၎င်း၏ပရိသတ်ကိုများအတွက်အပြည့်အဝမီဒီယာအတွေ့အကြုံကို၏ကွားနိုငျသောအဘို့ကိုအတွက်ညျြမနှော။ 20 Hz မှ 20,000 Hz အနေဖြင့်အပြည့်အဝအသံလှိုင်းရန်သင့်နားရွက်ဆက်ဆံပါ! လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ကနေ audio နည်းပညာခေါင်းဆောင်များကသူတို့ဥစ္စာကိုသရုပ်ပြနှင့်သင့်ကွားနိုငျကြိုးပမ်းသူအပေါင်းတို့ရှုထောင့်များတွင်အောင်မြင်မှုများဆီသို့သင့်ရဲ့စတူဒီယိုကိုလမ်းပြကူညီဖို့ဒီနေရာမှာဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ Post ကို | 2016 မှတဆင့် 11: ထုတ်လုပ်မှု Hub 15 ထံမှ4အသံလွှင့်အာရှ Show မှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖြစ်ပေါ်ဆယျ့နှစျကွဲပြားခြားနားသောဆွေးနွေးပွဲများ / မိန့်ခွန်းဝါကြွားတတ် 00 ဒီမီဒီယာ extravaganza ၏ပထမသုံးရက်၏သင်တန်းကျော်။ အဘယ်သူမျှမဆွေးနွေးပွဲများအကြိမ်ကြိမ်ဒါကြောင့်ဂရုတစိုက်အချိန်စာရင်းဖို့သေချာပါစေကြသည်! ဤရွေ့ကားဆုအနိုင်ရစပီလူအပေါင်းတို့သည် post ကိုဖြတ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုရောင်စဉ်ကနေအထိ - Colorists ကနေဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။ သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားသူတို့ရဲ့အသိအမြင် share, သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများကိုမြင်ရ, သူတို့ရဲ့နည်းစနစ်သင်ယူ!
တစ်ဦးကလေးပုံတပုံရာစုစက်မှုလုပ်ငန်းဝါရင် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Marco Solorioစာရေးဆရာနှင့်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပီရှိလိမ့်မည် ခရစ္စတိုဖာ Craker, ၏ယခင်တစ်အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဌ Sony က တစ်ဦးအော်စကာနှင့်အတော်ကြာဂရမ်မီများအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားပြီးခဲ့သူ BMG Masterworks လည်းရှိပါလိမ့်မည်, အလိုတော်အတိုင်း Dave Whitehead - အခြားလေးပုံတစ်ပုံရာစုဝါရင်, သူသည် အသံဒီဇိုင်နာနှင့်တေးရေးဆရာ, လက်စွပ် Trilogy ၏သခင်, အဆိုပါ Hobbit Trilogy, Elysium ဘုရင်ဟောင်ကောင်နှင့်အခြားသောကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်အပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘဲလျက်။ ကိုးကတခြားထိပ်တန်းစက်မှုလုပ်ငန်းစစ်ပြန်စပီကာရဲ့တန်းစီဇယားကိုထုတ်ပတ်လည်၌။
အဆိုပါ 2016 အသံလွှင့်အာရှ Show ကို၏နောက်ထပ် feature ကိုပဲ့ထိန်း7တစ်စီးရီးဖြစ်ပါတယ် နည်းပညာ Tours မှ ကြောင်းနေ့စဉ် 11 မှတဆင့်3အကြားဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုပြသချင်းစီခရီးစဉ်၏အဓိကအကြောင်းပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ်ထားသောပြသခဲ့သည်၏အထူးအစုံကနေအများအပြား 10 မိနစ်ပုဂ္ဂလိကဆန္ဒပြမှုများဆက်တိုက်ပါရှိပါတယ်။
ဤသူအပေါင်းတို့သည်ခရီးစဉ်တာဝန်ခံအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူအစောပိုင်း 15 မိနစ်ဖွင့်ပြသသင့်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအလှည့်လည်အဘို့ဖြစ်၏ နေရာတိုင်းမှာတီဗီ 1 ကနေအင်္ဂါနေ့မှာ: 30 မှ 3: 00; ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရဲ့ခရီးစဉ်နေသောခေါင်းစဉ်: IP ကိုအသံလွှင့် 11 မှ 00: 1 နှင့် 30 ထံမှ 4K / UHD 1 ထံမှ: 30 မှ 3: 00; ကြာသပတေးနေ့ဖြစ်ပါသည်: တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှု 11 မှ 00: 1, ပြီးတော့အင်္ဂါနေ့တစ်ထပ် 30 ထံမှ နေရာတိုင်းမှာတီဗီ 1 ထံမှခရီးစဉ်: 30 မှ 3: 00 ။ သောကြာနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရဲ့တစ်ထပ်နှင့်အတူခရီးစဉ်နိဂုံးခြုပျ IP ကိုအသံလွှင့် 11 ထံမှ: 00 မှ 1: 30, ပြီးတော့နောက်ဆုံးခရီးစဉ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု 1 ထံမှ: 30 မှ 3: 00 ။ သည်အခြားနည်းပညာများကိုအတွက် Self-ပဲ့ထိန်းခရီးစဉ်၏ option ကိုအထူးအခြေအနေများအောက်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
Network: ပါဝါကွန်ယက်အဖွဲ့ Reception သာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ထိပ်တန်းကြေးဝါကိုမှဖွင့်ပေမယ့်မကွောကျရှိသည်! အဆိုပါ: အခြားအမှုဆောင်အရာရှိနေဆဲနှစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာနှင့်အတူအချို့သောစီစဉ်ပေးကွန်ယက်အခွင့်အလမ်းများကိုစားသုံးလို့ရပါတယ် VIP ကွန်ယက်အဖွဲ့ Lounge အထက်အဆင့် Executives နှင့်အထူးဧည့်မှရရှိနိုင်ကြောင်း, နောက်ဆုံးတွင် အွန်လိုင်းစီးပွားရေးကိုက်ညီမှုအစီအစဉ် မည်သူမဆိုမှရရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ 2016 ထုတ်လွှင့်အာရှပြရန် "Technologies ကပေါင်းစပ်ခြင်းအကြောင်းအရာတှေ့ကွုံန။ " ဖြစ်ပါတယ်ထိပ်တန်းမှာ credo ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ဦးဆောင် မာလ်တီမီဒီယာ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဒီအောင် အ ယင်းအသံလွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်တက်ရောက်ရန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်။ အရှေ့နှင့်အနောက်နည်းပညာများနှင့်အတွေးအခေါ်များကိုပေါင်းစပ်ပြီးအဆိုပါ 22nd ရာစုဆီသို့တစ်ဖွဲ့လုံးကစက်မှုလုပ်ငန်းလောက်လွှဲ မှနေ. လွှတ်ကူညီပေးနေနေပါသည်! universal တိုးစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအောက်ပါအတိုင်း။
စင်္ကာပူပြပွဲများန်ဆောင်မှုများဆက်သွယ်ရေး, အင်ဂျင်နီယာ, Machinery နှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း်ထမ်းဆောင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ tradeshows တစ်အစုစုကိုစုစည်း။ ၎င်း၏ဖြစ်ရပ်များတသမတ်တည်းပြပွဲကြမ်းပြင်နီးပါး 80% များအတွက်စာရင်းကိုင်နိုင်ငံခြားပြသခဲ့သည်နှင့်အတူပင်လယ်ရပ်ခြားပါဝင်မှု၏မြင့်မားသောအဆင့်ကိုဆွဲဆောင်။ စင်္ကာပူပြပွဲများန်ဆောင်မှုများ Allworld ပြပွဲများမဟာမိတ်အဖွဲ့, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျော် 50 ရုံးများနှင့်အတူတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး က်ဘ်ဆိုက်.
2015 အာရှ Tradeshow ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး အသံလွှင်း broadcast အာရှ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဆက်သွယ်ရေး သဘောတူညီချက် H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo JCT-VC ကို ဆူညံသံလျော့ချခြင်း post ကိုထုတ်လုပ်မှု UHD / 4K / HD ကို က Ultra HD ဖိုရမ် viarte ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Warsaw ကို 2016-05-26
ယခင်: Mediaproxy အသံလွှင့်အာရှ 2016 မှာ Logserver Suite မှအများအပြားအပ်ဒိတ်များကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်
နောက်တစ်ခု: TVU ကွန်ယက် 2016 အမေရိကန်သမ္မတကမ်ပိန်းများအတွက် One-Stop တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုန်ဆောင်မှုများပေး